Iyo Librem 5 inozivisa kumwe kunonoka mukuendesa | Linux Vakapindwa muropa
Kwangopfuura gore, pano pa blog yekutevera kwaitwa nezve nhau uye kugadzirisa kubva kuPurism's Librem 5, yeiyo yakanyanya kutaurwa pamusoro penyaya yaive nezve kunonoka kwekutanga kwekuparura kwakaziviswa naPurism. Nguva yakafamba ikasvika iyo yakavimbiswa nguva yekutanga munaGunyana, kuburitswa kwezvikamu zvekutanga zveGNU / Linux smartphone yakanangana nekuchengetedza uye kuvanzika kwakazoburitswa.
Nezvo, kambani yakatanga zvakare chirongwa chekutakura yemana mijenya zvinotevera: Aspen Lot (Sep 24, 2019 - Oct 22, 2019), Birch Lot (Gumiguru 29, 2019 - Nov 26, 2019), Chestnut Lot (Dec 3, 2019 - 31 Zvita 2019), Dogwood batch ( Ndira 7, 2020 - Kurume 31, 2020), Evergreen batch (inofungidzirwa kuendesa nguva muQ2020 2020), Fir batch (inofungidzirwa kuendesa nguva muQXNUMX XNUMX).
Naizvozvi vanhu uyo akawana imwe, vaizoziva kana zvigadzirwa zvavo zvaizotumirwa. Asi ikozvino mune posvo nguva pfupi yadarika pawebhusaiti yako, iyo kambani yakazivisa kumbomiswa kwekuendeswa kweiyo Birch batch.
Chikonzero: kusavapo kwe10 kilohms resistor padunhu rakadhindwa izvo zvakakonzera kuti chiteshi cheUSB chikanganise.
"Isu takavimba uye takavimba kuti dambudziko rekuramba harina kunonoka kuendesa, asi zvinoitika kuti rakonzera kunonoka kwemazuva mashoma." Isu tichangobva kudzidza zviri pamutemo kuti zvidimbu zvekupedzisira zveBirch batch zviri kuunzwa kwatiri izvozvi uye tinotarisira kuzvigamuchira neChipiri, Mbudzi 26 (svondo rinouya). Panguva iyoyo, isu tinotumira nhare kune avo vanogamuchira iyi batch yeLibrem 5 svondo rinouya. (Panogara paine mukana wekuti zvikamu zvekupedzisira zvichaendeswa pamberi, asi iko zvino kuteedzera kunoratidza Mbudzi 26) «, anonyora kambani.
Chirevo chazvino chinotevera zvimwe zviviri zvakare nekuda kwematambudziko ehurdware. Muchokwadi, iyo Librem 5 yakavakwa yakakomberedza i.MX 8M chip. Zvinoenderana netsananguro kubva kuvakuru vekambani, ichi chidimbu chepuzzle ndicho chakakonzeresa kumberi kwekumbomiswa.
Mukukosha, iri bhagi muSoC iyo yakakonzeresa zvakanyanya bhatiri kupera. Naizvozvo, zvaive zvakafanira, pamwechete neNXP, iyo inopa iyo system pane chip, kutsvaga dzimwe nzira Iyo kambani yakanga yaongorora i.MX 8M Mini (imwe yakaderera-simba imwe nzira, asi iine mashoma sarudzo iripo), asi gadziriso kuNXP i.MX 8M software stack (iyo yakamhanya muna Kukadzi 2019) yakapera neResolver. zvinyorwa Post batch kuburitsa purogiramu yakateverwa.
Iyo Librem 5 iri, nekuda kwenzira yayo, imwe yemapurojekiti akateedzerwa kwazvo nevateveri vemahara uye yakavhurwa sosi. Naizvozvo, hazvishamise kuunganidza akasiyana maitiro, kusanganisira aya anoratidza kusahadzika.
Iyo kambani inobvumira vatengi kusarudza yavo yekuendesa mapakeji. Zvichienderana nesarudzo yavo, vanofanirwa kugamuchira alpha kana beta mhando. Yeyekupedzisira chigadzirwa. Iyo nguva yekuendesa yeFir lot inofungidzirwa muchina yechina yegore rinouya. Pamwechete, chero mutengi anoda kutora chigadzirwa chakazara anofanira kubvumirana kune yekupedzisira.
Kusvika Chikunguru 31st, iyo GNU / Linux smartphone yaive yawanikwa yekutengesa-kusati kwaita $ 649. Asi ikozvino kune avo vanofarira kuwana chidimbu, vanofanirwa kubhadhara zvishoma (chokwadi hachina kuwanda) kubvira mutengo wezvikamu zvitsva i $ 699.
Mukufunga kwevakawanda, mutengo wekutenga mudziyo panguva ino hauna basa, nekuti mutsauko uri mushoma.
Chekupedzisira, inguva yekumirira zvidimbu zvisipo kuti zvisvike kuPurism kuitira kuti batch iriko yakamirirwa itumirwe nekukurumidza sezvazvinogona. Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti sezvo sarudzo yekutenga chikamu ichiwanika, Purism haigone kutora njodzi dzakawandisa mukuwandisa (sezvo chigadzirwa chiri chitsva) saka sarudzo yakanakisa ndeyekuzvidzikisira kune imwe nhanho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iyo Librem 5 inozivisa kumwe kunonoka mukutakura
Iyo itsva vhezheni yaDevuan 2.1 "ASCII" inosvika, iyo forogo yeDebian isina systemd